Kala beddelashada xogta u dhexeeya dhufto ee kala duwan waxaa la isku dayaa in uu mar walba soo jiitay user iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in ka hor inta dhufto ee ay la demin tusaale ahaan ka blackberry in Android ama qeybsanaan user wuxuu hubinayaa in in ugu wanaagsan iyo state of habka farshaxanka waxaa la socda in la sameeyo kala iibsiga keliya ma aha, laakiin sidoo kale ay khuseyso. Tutorial waxaa loo qoray si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah habka tahay ma aha oo kaliya ku xusan laakiin sidoo kale faah buuxa si loo hubiyo in arrin kala iibsiga ma aha arin oo dhan.
Arrimaha guud ee ku saabsan xogta ka LG gudbaayo BlackBerry
Waxaa jira arin badan marka ay timaado dhibaato ka sakhiray oo halkan user wuxuu hubinayaa in in xalka ugu wanaagsan ee suurto gal ah waxaa kaliya oo aan codsan dib markii tutorial tani ayaa loo akhriyey, laakiin saamaynta waxaa sidoo kale gaarsiiyaa heerka ugu sarreeya si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. Hoos waxaa ku qoran liiska arimaha ugu badan ee user a wajahaya ee la xiriirta LG kala iibsiga / Blackberry oo arimahan dhimaya nidaamka iyo sidoo kale mararka qaarkood sameeyaan macluumaadka u gudbiyaan arrin aad u adag tahay in la raaco, sida haddii user waa inuusan ka dibna codsiga ah xallinta waa wax aad u adag,
1. Stability arrinta
Nasiib darro waxaa jira geeddi-socodka lagu qeexay ma marka ay timaado LG in Blackberry ama haddii spectrum la ballaadhiyaa ka android in Blackberry oo sidaas daraaddeed kala iibsiga xogta aan xasillooneyn oo dhan. Tani waxay keenaysaa in arrimaha aan sinnayn iyo user mararka qaarkood sidoo kale ka heli isaga laga badiyay marka ay timaado codsiga ah ee Jidka in la raacay inuu sameeyo wixii kaloo ah. Baahida loo qabo saacadduu waa in la hubiyo in arrinta la xalin tababarka ka mid ah horumarinta labada shirkadood si xalka ugu wanaagsan ee suurto waxaa la socda in arrintan la xiriira, taas oo weli ay tahay in la helay.
2. arrimaha la xiriira madal Cross
In kastoo tababarka ayaa lagu qeexay in tiro ka mid xasilloon siyaabo laakiin weli user helo arrinta marka ay timaado soo gudbin shaqeynayaan. The files in wareejiyo ama ka soo dhaqaaqay hal madal si kale midkood, ma ay shaqeeyaan haddii ay sameeyaan khaladaad soo noqnoqda waxaa lagu ogaan karo ka dhigaya arrimaha ka xun. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira, waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah qalab iskutallaabtiisa u tahay shaqeynta madal la adeegsadaa si loo hubiyo in diinta file lagu sameeyo in arrinta la xalin.
3. arrimaha Software la xiriira
Sidoo kale waa mid ka mid ah arrimaha ugu wajahay arrintan la xiriira si ay u hubiyaan in heshiiska u dhaxeeya dhufto ee marna waa guul. Waxaa jira dhowr ka mid ah arrimaha la xiriira software in user a wajihi karo arrintan la xiriira iyo sabab la mid ah waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in taageerada labada LG iyo blackberry waxaa la xiriiray si ay u hubiyaan in arrinta marnaba helo heerka ku xiga. Khilaafka software ayaa arrintan la xiriira sidoo kale waa mid ka mid ah arrimaha ay waajahaan user iyo Samsung Kies waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu xumaa ee arrintan la xiriira. Si aad u hubiso in xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin waxaa lagula talinayaa in ay akhriyaan tutorial this oo dhan.
4. arrimaha kala iibsiga Qayb
Sidoo kale waa in la ogaadaa in inta lagu jiro kala iibsiga sakhiray waxa la ogaaday in qaar ka mid ah qiimaha xogta aan la wareejiyo oo dhan iyo kuwa kale oo loo wareejin buuxda iyo sabab la mid ah arrimaha soo qayb iibsiga abuuraan buuq. Qaybta dambe ee tutorial this hubiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka software tahay in arrintan la xiriira aan la soo bandhigay oo keliya laakiin user sidoo kale helo natiijada ugu wanaagsan ka dhigi doonaa.
Sida loo xogta ka LG wareejiyo Blackberry
Waxaa jira dhowr siyaabood si loo hubiyo in xogta ka Blackberry waxaa loo wareejiyey Android oo aan wax arrintan oo dhibaato iyo qayb ka mid ah tutorial waa inuu xaqiijiyo in sida ugu free uguna habboon ee xogta ka LG gudbaayo Blackberry aan la soo bandhigay oo keliya, laakiin waa waxaa sidoo kale ku weheliyay Screenshot si loo hubiyo in hannaanka uu noqonayaa fududahay user ay u dhaqan:
1. Bluetooth labada LG iyo blackberry waa in la soo jeestay on:
2.Beerta user waa in markaas loo hubiyo in files in ay tahay in la wareejiyo lagu doorto ama helay siyoodba icon ku habboon marka ay timaado LG:
3.By isticmaalaya Eray qalabka user waa inay hubiyaan in files waxaa lagu wareejiyay ama la wadaago sida shaashadda hoose:
4.On qalab kale sida blackberry user ka bilaabi kartaa helo files ah oo aan wax arrintan oo dhibaato iyo tan ayaa sidoo kale soo gebogebeeyay habka Dhameystiran:
Phone 1 click in phone qalab kala iibsiga: Wondershare MobileTrans
Waxaa by fog barnaamijka ugu wanaagsan ee software taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican iyo gobolka natiijooyinka tahay marka ay timaado soo gudbin kala iibsiga. Sidoo kale waa mid ka mid ah barnaamijyada in la soo socoto dhowr qaababka si aad u hubiso in xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin by user ee la xiriirta in ay soo gudbiyaan kala iibsiga. Ka dib markii qaar ka mid ah muuqaalada in ay tahay in la tixgeliyo ee la xiriira barnaamijka dooda:
Barnaamijka waa inuu xaqiijiyo in files waxaa loo wareejiyaa dhexeeya dhufto ee kala duwan ee habka ugu fudud. Just click hal ayaa loo baahan yahay si loo hubiyo in heshiiska la soo gabagabeeyo file marka ay timaado shaqeynayaan.
Si ka duwan hababka kale waa 100% ammaan in la isticmaalo oo aan halis lahayn taas oo macnaheedu yahay 0% khasaaro xogta marka files waxaa laga soo wareejiyay hal madal in kale.
Barnaamijka ayaa lagu taageerayaa 3000+ qalabka iyo halkan ka qalab cusub oo la bilaabay adduunka oo dhan ayaa waxaa sidoo kale ku daray oo ku salaysan maalin walba.
Macluumaadka telefoonka ee si fudud loo xaqiijisatay karaan, ka dibna dib loo soo celiyo si loo hubiyo in user marnaba helo dhibaato marka ay timaado amaanka xogta iyo ammaanka.
Barnaamijka waxaa kale oo ay taageertaa oo dhan network bixiyeyaasha ugu waaweyn ee dunida oo dhan oo ay ku jiraan Verizon, AT & T iyo qaran.
Poll: Waa kuwee qalabka BlackBerry ayaad isticmaashaa?
Laga soo bilaabo liiska soo socda 10 aaladaha Blackberry oo caan user ay u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah in la isticmaalo:
2.Beerta BlackBerry Classic
3.Beerta BlackBerry Porsche Design P9982
4.The BlackBerry 9720
5.The BlackBerry Z3
6.The Blackberry Z30
7.The BlackBerry Q10
8.The BlackBerry Z10
Q5 9.The BlackBerry
10.Sida BlackBerry Geesi 9900
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga LG in Blackberry